Warbixinta sanad laha ah ee Kooxda kormeerka Umadaha Midoobay ee arimaha somaliya | Somalisan.com
Home Afsomali Warbixinta sanad laha ah ee Kooxda kormeerka Umadaha Midoobay ee arimaha somaliya
Warbixinta sanad laha ah ee Kooxda kormeerka Umadaha Midoobay ee arimaha somaliya
Warbixinadii ugu dambeysay ee Qaramada Midoobay ee kormeerka warbixinta ee sanadlaha ah ayaa lagu daabacay warbixinta sanadlaha ah ee ku saabsan Soomaaliya, qiimeynta lagu sameeyay warbixinta iyo natiijooyinka guud ee la helaa waxay caawineysaa Focus Ford oo eegaysa qaab lagu dhisayo dib u soo kabashada Soomaaliya. Warbixintan waa in lagu soo dhaweeyo loona soo dhaweeyaa ilaha baaritaanka iyo content-ka, kaas oo ah in ay qayb ka noqoto Soomaaliya, soo kabashada, nabadda iyo xasilloonida.
Iyadoo ay warbixintaan akhrisey haddana weli waa nasiib darro waxaa jira tiro dad ah oo saameyn ku yeeshay badbaadinta malleeyshiyaadka qabaa’ilka ee UNMG u arkeen shakhsiyaadka caqabad ku ah nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya.
Anigoo ah dhaqdhaqaaqe bulsho iyo Broadcaster oo ku nool qurba joogta kuwaas oo doonaya horumar iyo xasillooni ka jirta Soomaaliya, waxaan jeclaan lahaa in aan si rasmi ah u codsado Kooxda Kormeerka ee QM si ay u soo jeediyaan ra’yigoodii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmake iyo saaxiibadiisi si kor loogu qaado xasiloonida iyo fowdada Arrimaha Soomaaliya (dawlad goboleedyada).
Qaab-dhismeedka Dowladda Federaalku wali waa mid jilicsan oo waxtarka ugu dambeysa ee Soomaaliya u baahan tahay waa kuwa siyaasadeed oo badan oo u muuqda inay sii korodhsanayaan danaha dalalka kale ama kooxaha xiisaha leh ee jahannamada cadaadiska ah ee ka dhaxeeya Midnimada Federaaliga ah ee Soomaaliya si loo raadiyo himilooyinkooda siyaasadeed ee u gooni ah. Tani waa in la niyad-jebinayaa markii beesha caalamku si xoog leh u maal-galiso siyaasad iyo dhaqaale ahaan Soomaaliya. Inay leeyihiin siyaasiyiin siyaasadeed oo ku raaxaysta xasilooni iyadoo xildhibaannadu ay ka hor imaanayaan nabadda iyo xasilloonida.
Shirkadaha xawilaadda lacagaha iyo shirkadaha kale ee wali waxay kaalin muhiim ah ka qaataan kobcinta dhaqaalaha iyo taageerada gargaarka bani’aadamnimada. Waxay sii wadaan inay sii wataan hannaanka nololeed ee dhaqaalaha Soomaalida iyo awooda qurba-joogta Somaliyeed in ay u diraan taageero dhaqaale oo aad u baahsan oo qoysaskooda ku nool Soomaaliya. Dhibaatooyin badan ayaa la kulmay dibadda iyada oo loo marayo xiritaanka koontada bangiga, haddana way adagtahay, oo ay ku jiraan aqlabiyad intabadani ay tahay mid hufan oo macquul ah oo lagu ilaalinayo nolosha malaayiin muwaadiniin Soomaali ah, guri iyo dibaddaba.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira dhowr shirkadood oo waaweyn oo ka mid ah shirkadaha xawaaladaha ee Soomaliya iyo hay’adaha kale ee ganacsiga kuwaas oo bixiya “nooc canshuur-daro ah si looga dhigo Alaabaab, taas oo ah wax aan la aqbali karin oo lid ku ah argagixisada. Waxaan jeclaan lahaa in aan arrintan u keeno Kooxda Kormeerka ee QM si ay u tixgeliyaan warbixinta soo socota ee Soomaaliya.
Tani waa qarsoodi furan oo u baahan dareen deg-deg ah iyo ficil ka socda beesha caalamka iyo xukuumadda Soomaaliya. Haddii aan nahay dhamaan daacadnimo iyo halis ah oo ku saabsan ka hortagga maalgalinta argagixisada iyo xagjirnimada rabshadaha, waa in aan si taxadar leh u eegnaa arrimahan muhiimka ah, taas oo caqabad ku ah nabadgelyada iyo degganaanshaha Soomaaliya.
Si loo fududeeyo, weerarkii ugu dambeeyay ee argaggixisanimo ee ka dhacay magaalada Zoope iyo Hotel Nasa Hablood Hotel halkaas oo aan ku luminay in ka badan 500 oo muwaadiniin ah oo aan waxba galabsan oo aan la helin iyada oo aan helin taageero maaliyadeed oo adag oo loogu talagalay Alshabab. Waxaan mar hore ku tirineynaa qiimaha waana inaanan sii wadeynin dulqaadkan.
Iyadoo Kooxda Kormeerka QM ay ku tiri “ugu dambeyntii, guud ahaan dhererka dhoofinta sharci-darrada ah ee dhuxusha laga keeno koonfurta Soomaaliya waxay la mid tahay heerarkii hore. Marka la barbardhigo inta badan 2015 iyo 2016, markii Al-Shabaab ay si adag u mamnuucday ganacsiga dhuxusha ee meelaha ay ka taliso, kooxdu waxay dib u soo ceshatay canshuurta dhuxusha ee isku xirta meelaha isku xirta iyo dekadaha Buur Gaabo iyo Kismaayo.
Qiyaasta xagjirnimada ayaa soo jeedinaysa in al-Shabaab ay ugu yaraan $ 10 milyan sannad walba ka hesho ganacsiga dhuxusha sharci darada ah. Dubai, Imaaraadka Carabta, ayaa weli ah meesha ugu muhiimsan ee dhoofinta dhoofinta iyo sidoo kale xarun loogu talagalay shabakadaha dambiyada ah ee ku xad gudbaya dhuxusha dhuxusha iyada oo aan wax dambi ah lahayn. Iyadoo laga soo reebayo Kuwait, fulinta mamnuucidda dhuxusha ayaa liitay, gaar ahaan Maamulka Maamulka Ku-meel-gaarka ah ee Jubba iyo Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, iyo Imaaraadka Imaaraadka Carabta ee ka mid ah wadamada soo dhoofiya.
Inkastoo aan la ogeyn sababaha loo xakameyn lahaa cuna qabataynta, haddana xaaladaha qaarkood waxay si aan qarsoodi lahayn ugu guul daraysteen in ay u hoggaansamaan xayiraadda dhuxusha, waxay sahlaysaa maalgelinta Al-Shabaab waxayna wiiqaysaa dedaallada argagixisada ee ka socda Soomaaliya “bogga 7 UNMG Report
Warbixinada kor ku xusan waxay sidoo kale ka dhigan tahay sida warbixinta UNMG ee warbixinta UNMG ee la xiriirta Imaaraadka Imaaraadka Carabta oo ah waddan indhaha laga lalmayo dhuxusha laga iibsado Alshabaab si ay u soo galaan dalkooda, si aan toos ah u caawinno ama u hanan karno faa’iidada Alshabaab.
Taas macnaheedu waxa weeye, UNMG waxa ay muhiim u tahay in ay xooga saaraan shakhsiyaadka sida Cumar Cabdirashiid Sharmake iyo dowladaha iyada oo aan wax cabsi ah ama danbi ah ku lahayn warbixinta soo socota ee UNMG ee warbixinta Golaha Ammaanka. Waa aragtidayda in aan si xeeldheer u aheyn beesha caalamka ee Soomaaliya, dib u soo kabashada Soomaaliya way sii xumaanaysaa oo gaabisaysaa. Tani ma aha danta ugu fiican ee Soomaaliya iyo beesha caalamka.
Sidaa daraadeed, UNMG waa in ay tixgelisaa ciqaab adag / ficil iyo talooyin si ay uga niyad-jabaan kuwa siyaasadda mustaqbalka. Soomaaliya waa soo kabasho iyo dawlad jilicsan, waana in aan loo adeegsan ujeedooyin siyaasadeed oo siyaasadeed. Inta badan, waxay u baahan tahay siyaasad, dhaqaale, iyo ilaalin xagga sharciga ah iyo ilaalinta ammaanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si loo arko dib-u-habeyn loo baahan yahay si dib loogu soo celiyo qarankii Soomaaliyeed. Si kale haddii kale, waxaan ka baqayaa taariikhda inay go’aamiso Beesha Caalamka sidoo kale waxay qayb ka tahay dhibaatooyinka Soomaaliya.
Previous articleDhageyso Khadiijo Maxamed Diiriye magacii Jiryow Kheyre iyo farmaajo Ceynaanka haaya Mucaaradku wuxuu ku maaleysayanayaa nairobi iyo dubai
Next articleFarmaajo iyo Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada oo kulan ku yeeshay Muqdisho ( DAAWO SAWIRADA )
Somalisan News - June 20, 2019
aqriso khudbooyinkii madaxda maamulada ay kula baratamayeen dowlada iyo boorka sawirka oo shirka gaf...